Ọchịchị | Law & More B.V.
blog » Ịgbahapụ
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịkwụsị ọrụ ọrụ, ma ọ bụ ịgba arụkwaghịm, dị mma. Nke a nwere ike ịbụ ikpe ma ọ bụrụ na ndị abụọ ahụ na-atụ anya ịgba arụkwaghịm ma mechie nkwekọrịta nkwụsị na nke a. I nwere ike ịgụtakwu banyere nkwụsị site na nkwenye na nkwekọrịta nkwụsị na saịtị anyị: Dismissal.site. Na mgbakwunye, ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ a ga-ahụta dị ka ihe dị mma ma ọ bụrụ naanị otu n'ime ndị ọzọ chọrọ arụkwaghịm. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ ahụ nwere ike iche na ọ dị mkpa, maka ebumnuche dịgasị iche, ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ na-emegide uche nke onye ọzọ, onye were ya n'ọrụ. Onye ọrụ ahụ nwere ọtụtụ nhọrọ maka nke a: kwụsị nkwekọrịta ọrụ site na ọkwa ma ọ bụ mechie ya site n'itinye akwụkwọ arịrịọ maka mgbasa nke ụlọ ikpe. N'okwu abụọ a, agbanyeghị, onye ọrụ ahụ ga-eburu n'uche oke oke dị mma na nhọrọ ndị a.
Kwụsị nkwekọrịta ọrụ site na ọkwa. A na-akpọkwa ngwụsị nkwekọrịta nke ọrụ ọrụ site na ọkwa. Onye ọrụ ahụ ọ na-ahọrọ usoro arụkwaghịm a? Mgbe ahụ, iwu na-akọwapụta oge ọkwa ọkwa nke onye ọrụ ga-ahụ. N'agbanyeghị oge nkwekọrịta ahụ, oge ọkwa a na-abụkarị otu ọnwa maka onye ọrụ. A na-ahapụ ndị ọzọ ịhapụ oge oge ọkwa a na nkwekọrịta ọrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na agbatịkwu oge onye ọrụ ahụ ga-ahụ anya, a ga-akpachara anya iji hụ na okwu a agafeghị ọnwa isii. Onye ọrụ ahụ ọ na-edebe okwu ekwere? N'okwu ahụ, nchupu ahụ ga-ewere ọnọdụ na njedebe nke ọnwa na ọrụ ga-akwụsị n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa kalenda. Ọ bụrụ na onye ọrụ anaghị asọpụrụ oge ọkwa ọkwa ekwere, mgbe ahụ nchupu site na ọkwa adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ. N'okwu ahụ, ọkwa nke ịkwụsị onye ọrụ ga-akwụsị nkwekọrịta ọrụ ahụ. Agbanyeghị, onye were ya n'ọrụ enweghịzi ụgwọ ma onye were ya n'ọrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ. Compensationgwọ ịkwụ ụgwọ a na-abụkarị ego nke ụgwọ ọnwa maka akụkụ nke oge ọkwa ọkwa a na-ahụbeghị.
Inwe nkwekọrịta ọrụ ahụ site n'ụlọ ikpe. Na mgbakwunye na ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ site na ịnye ọkwa, onye ọrụ ahụ nwere nhọrọ mgbe niile itinye akwụkwọ na ụlọ ikpe iji weta mgbasa nke ọrụ ọrụ. Nhọrọ a nke onye ọrụ bụ ọkachasị nke ọzọ ozugbo mgbasa enweghị ike iwepu nkwekọrịta ya. Onye ọrụ ahụ ọ na-ahọrọ usoro nkwụsị a? Mgbe ahụ, ọ gha igosipụta arịrịọ maka mgbasa na ederede yana ezigbo ihe kpatara ya dị ka e zoro aka na ya na 7: 679 ma ọ bụ isiokwu 7: 685 paragraf 2 nke Dutch Civil Code. A na-aghọta ihe ngwa ngwa pụtara (mgbanwe na) ọnọdụ ndị na-eme ka onye ọrụ ahụ ghara ịtụ anya na ọ ga-ekwe ka nkwekọrịta ọrụ ga-aga n'ihu. Ọnọdụ ndị dị a ọ dị mkpa ma Courtlọikpe Ngalaba na-enye arịrịọ onye ọrụ? N'ọnọdụ ahụ, Courtlọikpe Subdistrict nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ ahụ ozugbo ma ọ bụ na ụbọchị na-esote, mana ọ bụghị na iweghachi ọrụ. Bụ ihe kpatara ọsịsọ n'ihi ebumnuche ma ọ bụ mmejọ nke onye were gị n'ọrụ? Mgbe ahụ onye ọrụ ahụ nwekwara ike ịrịọ ụgwọ.
Rụọ okwu ọnụ?
Onye ọrụ ahụ ekpebiela ịgba arụkwaghịm wee kwụsị nkwekọrịta ọrụ ya na onye were ya n'ọrụ? Nke a na - emekarị nke edere site na ọkwa nke ịkwụsị ma ọ bụ ịkwụsị. N’akwụkwọ ozi dị otú ahụ ọ bụ omenala ịkọ aha onye ọrụ na onye nwe ya yana nke ahụ na mgbe onye ọrụ ahụ kwụsịrị nkwekọrịta ya. Iji zere arụmụka na-enweghị isi na onye were gị n’ọrụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ka onye ọrụ were mechie akwụkwọ ozi nchupu ya ma ọ bụ ịgba arụkwaghịm ya na arịrịọ maka nkwenye nke nnata na iziga akwụkwọ ozi ahụ site na e-mail ma ọ bụ site na akwụkwọ ozi edebanyere aha.
Agbanyeghị, nhazi akwụkwọ ikike ịchụpụ abụghị iwu na ọ na-ejekwa ozi maka ebumnuche nhazi. Ka emechara, nchupu bụ a iwu-free iwu omume na ya mere nwekwara ike na-arụpụta okwu ọnụ. Ya mere, ọ ga-ekwe omume ka onye ọrụ were okwu ọnụ gwa onye were ya n'ọrụ na mkparịta ụka nke ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ wee si otú a chụọ n'ọrụ. Otú ọ dị, usoro ịgba arụkwaghịm dị otú ahụ nwere ọtụtụ ihe ndọghachi azụ, dị ka amaghị ihe banyere mgbe oge ọkwa ga-amalite. Ọzọkwa, ọ naghị enye onye ọrụ ikike ikikere ịlaghachi na nkwupụta ya wee si otú a zere ịgba arụkwaghịm.
Iwu iji nyochaa onye were gị n'ọrụ?
Onye ọrụ ahụ ọ ga-agba arụkwaghịm? Iwu ikpe egosila na ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ enweghị ike ịtụkwasị obi na nke a bụ ihe onye ọrụ ahụ chọrọ n'ezie. N'izugbe, achọrọ ka nkwupụta ma ọ bụ omume nke onye ọrụ ahụ n'ụzọ doro anya na n'ụzọ doro anya gosipụtara ebumnuche ya ịhapụ. Mgbe ụfọdụ achọrọ nyocha ọzọ nke onye were gị n'ọrụ. N'ezie, n'okwu banyere ịgba arụkwaghịm nke onye ọrụ ahụ, onye were ọrụ nwere ọrụ nyocha, dị ka Supremelọikpe Kasị Elu nke Dutch si kwuo. Na ndabere nke ihe ndị a, onye were gị n'ọrụ ga-ebu ụzọ chọpụta ma nchụpụ ọ bụ n'ebumnuche nke onye ọrụ ya:
Ọnọdụ nke onye ọrụ ahụ
Oke nke onye ọrụ ahụ ghọtara nsonaazụ ya
Oge onye ọrụ ahụ kwesịrị ichegharị na mkpebi ya
Mgbe ị na-aza ajụjụ ahụ ma onye ọrụ ahụ chọrọ ịkwụsị ọrụ ahụ, a na-eji ụkpụrụ siri ike. Ọ bụrụ na, mgbe nyocha nke onye were gị n'ọrụ mere, ọ dị ka nchụpụ abụghị n'ezie ma ọ bụ n'ebumnuche nke onye ọrụ, mgbe ahụ onye were ya n'ọrụ enweghị ike ịjụ onye ọrụ ahụ. N'ezie, ọ bụghị mgbe ị '' na-eweghachi "onye ọrụ ahụ adịghị emerụ onye were ya n'ọrụ. N'okwu ahụ, enweghị ajụjụ gbasara ịchụpụ ma ọ bụ ịkwụsị nkwekọrịta ọrụ nke onye ọrụ ahụ.
Ihe nlebara anya ma ọ bụrụ na ị kwụsị
Onye ọrụ ahụ ekpebiela ịga n'ihu arụkwaghịm? Mgbe ahụ ọ bụkwa ihe amamihe dị na ya ị toa ntị na isi ihe ndị a:
Ezumike. O kwere omume na onye ọrụ ahụ ka nwere ọtụtụ ụbọchị ezumike dị. Onye ọrụ ahụ ọ ga-achụpụ ya? N'okwu ahụ, onye ọrụ ahụ nwere ike iwepụ ụbọchị ezumike fọdụrụ na ndụmọdụ ma ọ bụ kwụọ ha ụgwọ n'ụbọchị nchụpụ. Onye ọrụ ọ họọrọ ịhọrọ ụbọchị ezumike ya? Mgbe ahụ na-arụrụ ọrụ ga-ekweta na nke a. Onye were ya n’ọrụ nwere ike jụ ezumike ahụ ma ọ bụrụ na e nwere ezigbo ihe kpatara ya. Ma ọ bụghị ya, a ga-akwụ onye ọrụ ụgwọ maka ụbọchị ezumike ya. Ego ole na-abịa n'ọnọdụ ya enwere ike ịchọta ya na akwụkwọ ọnụahịa ikpeazụ.
Uru. Onye oru nke emebisiri nkwekọrịta oru ya ga-adabere na ezi uche na mkpuchi mkpuchi enweghi oru maka ibi ndu ya. Agbanyeghị, ihe kpatara ya na otu esi kwụsị ọrụ ọrụ ga-emetụta ohere nke ịnweta uru enweghị ọrụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ agba arụkwaghịm, onye ọrụ ahụ anaghị enwekarị elele na enweghị ọrụ.
You bụ onye ọrụ ị na-achọ ịgba arụkwaghịm? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More. Na Law & More anyị ghọtara na nchụpụ bụ otu n'ime usoro kachasị dị na iwu ọrụ yana ọ nwere nsonaazụ dị ukwuu. Ọ bụ ya mere anyị ji eme ihe ọ bụla anyị nwere ike ime iji chọpụta ọnọdụ gị na ohere ị nwere. I nwekwara ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara mgbasa na ọrụ anyị na saịtị anyị: Dismissal.site.
Previous Post Ọrụ nke onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ dịka Iwu Ọnọdụ Ọrụ
Next Post Ọnọdụ na njikọ nke njikọta ezinụlọ